“Rehefa mihaino ny mpampianatra anay manazava momba ny vatan’olombelona aho, dia tonga dia resy lahatra hoe misy ny Mpamorona. Efa samy manana ny anjara asany ny zava-drehetra ao amin’ny vatantsika, hatramin’ny lehibe indrindra ka hatramin’ny kely indrindra. Matetika anefa no tsy tsapantsika akory ny fiasany. Tena mahavariana ilay izy!”—Teresa.
“Rehefa mahita tranobe aho, na sambo, na fiara, dia lasa saina hoe: ‘Mba iza àry no nanao an’itony?’ Olona mahay be, ohatra, vao mahavita fiara. Misy zavatra kely be dia be tsinona ao anatiny, nefa tsy maintsy mety tsara daholo ireny, izay vao mandeha ilay izy. Koa raha ny fiara aza nisy nanao, mainka moa fa ny olombelona?”—Richard.
“Eritrereto ange e! Ny manam-pahaizana be aza tsy nahalala ny fomba fiasan’izao rehetra izao, raha tsy nikaroka an-jatony taona, sady amin’izay vao kely fotsiny no fantatr’izy ireo! Dia zavatra hoatr’izany ve dia hoe tsy nisy nanao fa nisy ho azy teo? Tsy mitombina mihitsy izany amiko!”—Karen.
“Arakaraka ny nianarako siansa no nahitako fa tsy marina ny evolisiona. Be dia be amin’ny zavatra eo amin’ny natiora, ohatra, no tsy miovaova sy marina foana, ka azo atao kajy mihitsy aza. Tena miavaka koa isika olombelona satria isika ihany, ohatra, no manontany tena hoe inona no dikan’izao fiainana izao, ahoana no nampisy azy, ary hanao ahoana ny hoavy. Milaza ireo mino ny evolisiona fa karazana biby ny olombelona. Tsy hain’izy ireo hazavaina anefa hoe nahoana ny olona ihany no manontany an’ireo, fa tsy ny biby. Ny evolisiona amiko no sarotra ‘inoana’ kokoa, noho ny hoe misy ny Mpamorona.”—Anthony.
Afaka mamaly ianao hoe: “Dia izany tokoa ve ny eritreritrao? Izaho indray aloha tsy manaiky an’izany e! Rehefa nanontaniana mantsy ny mpampianatra siansa 1 600 mahery, avy any amin’ny oniversite malaza maromaro, dia ny ampahatelony no nilaza hoe mino an’Andriamanitra. * Dia mihevitra ve ianao fa tsy mahay n’inona n’inona ireny olona ireny?”
^ feh. 32 Loharanon-kevitra: “Religion and Spirituality Among University Scientists”, nosoratan’i Elaine Ecklund, 5 Febroary 2007.